Nhau - Makorokoto nekuwana "Kaviri Kukunda"
Mhepo Kunobva Kurapa
Makorokoto nekuwana "Kaviri Kukunda"
Gore rino, SNS haina kungopfuudza chitupa cheyekutanga mabhizimusi epamusoro-tech muZhejiang Province mu2020, iyo serial nhamba iri 2583. Uye akahwina chitupa "Zhejiang Science uye Technology Chidiki uye Pakati" chakaburitswa neZhejiang Science uye Dhipatimendi reTekinoroji.
Mumakore achangopfuura, SNS yakaenderera mberi ichiwedzera kudzidziswa kwayo uye kudyara muzvikwata zveR & D, zvichiramba zvichigadziriswa mashandiro, hunyanzvi hwekuvandudza matekinoroji, uye kugadzira zvigadzirwa zvitsva, uye ndokugadzira solenoid vharuvhu yekuvimbika bvunzo murabhoritari pamwe neZhejiang University. Mugore rimwe chete kubva muna 2019 kusvika muna 2020, gumi nematanhatu emvumo yakashandiswa (kusanganisira matatu ekugadzira patent, 8 ekushandisa mamodheru, uye maviri maitiro patent).
Mhedzisiro yakanaka kukurudzira, asi zvakare kukurudzira. Kuvimba netekinoroji, SNS inoramba ichivandudza, kuwedzera R & D kudyara, kunatsiridza simba rekusimudzira bhizinesi, uye kugadzirisa mufananidzo wekambani. Ipa vatengi nemabasa anobudirira. Ipa yakasimba rutsigiro rwehunyanzvi kune ramangwana rekambani yemhando yepamusoro kusimudzira!
China SNS Pneumatic yakavambwa muna 1999 iyo ikozvino yave iri inotungamira yekutengesa zvinhu zvepneumatic muChina. Iyo kambani inovhara nzvimbo ye30000 ㎡, iine mashanu ekugadzira mabhesheni uye anopfuura makumi maviri emakambani anobatsira ane vashandi vanopfuura 1000.SNS yapfuura ISO9001 uye 2000 Quality Management System Certification nekuda kwebasa rayo rakanaka uye nemhando yepamusoro. Parizvino pane vanopfuura mazana maviri vamiririri nevashambadzi pasi rese uye isu tiri kutarisira kusvika kumusika wepasi rese.
Kambani: China SNS Pneumatic Co, Ltd.
Kero: Kwete. 166 Weiliu Road, Economic Development Zone, YueQing, Zhejiang, CHINA